Kenya oo Xabsiga dhigtay Gudoomiyihii Gaarisa iyo Eedaymo la yaab leh iyo Maxkamad lagu saaray Nairobi | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Sep 15, 2020 - 36 Aragtiyood
Nairobi ( Kalshaale ) Maxkamad ku taalla Magaalada Nairobi Caasimadda dalka Kenya waxaa barqonimadii maanta la horgeeyay Guddoomiyaha Ismaamulka Gaarisa Cali Bunow Qorane oo shalay laga waday Magaaladaas.
Balse Cali Bunow ayaa iska foogeyey eedaymaha kala duwan ee loosoo jeediyey.
Allow adaa Gumeystaha ka xoreeyey Caasimadaha IRIR SAMALE
waa Tubtii iley Luf Luf Axmaaro
* Every dog has a time to BARK.
Gudoomiyaha Gaarissa ee musuqmaasuqa lagu soo eedeyey waa waa nin Ogaden Cawdwaaq ah, ninka ku soo eedeyeyna waa Ogaadeen Cabdalle ah, waa ninka ugu sareeya la dagaalanka musuqnaasuqa Kenya, waxuu horey u xiray rag kale oo Kenyaan ah, oo gudoomiyeyaal gobolo ahaa.
Markaa adigu hawshaa kuuma taalo, ee Ugaandheska habeenkii ku seexiyo ka waran Kkkkkk.
Sheeqaal baa yaabtay.
Siyaasadahan geeska Africa adigu sheekhaal baa ka tahay markaa sheekooyinkan Sheekaal ka ahoow Kkkk.
Gudoomiyaha gaarisa sixunbaa loo bahdilay.
Kan sidaas u bahdilaayo. Waa gumeeste madoow.
Kalama yaqaan irirsamaale iyo somaali samaale.
Anna xanaaq ayaan meel aan istaago la.ahay adna digasho ayaad muujineysaa.
Hal degmo koonkan/aduunkan aan ku noolnahay kuma lihid, dad kalaad ka sheekeysaa 24/7 maxaa adiga ku wareeriyey oo uu yahay dhibka ku haysta?yaab!
WIXII MACNO LEH WAA LAWADA LEEYAHAY. WBT
kuwa malayinta dhacay ee dabaqyada ku dhistay ee
Dalkeena jooga goorma maxkamad la keeni doona
ilaa kuwii dadka laayey ayaa madax ah oo na soo
Horfadhiya Qabyaladey Qarankii waa iga curyamisy
Hal degmo koonkan/aduunkan aan ku noolnahay kuma lihid, dad kalaad ka sheekeysaa 24/7 maxaa adiga ku wareeriyey oo uu yahay dhibka ku haysta
DIGASHO igama ahan ee waxaan u la jeedaa waa in dadkaas laga xoreeyo Gumeystaha madow IRIR SAMALE liyoow.
Yes Irir samaali waa deganyahiin NFD iyo Somali Galbeed lkn, SAB SAMALE ayaa u firfircooneyd Labadaas qeybood.
Wajeer iyo Diri-dabe haddii loo raro Caasimadaha NFD iyo Somaligalbeed ‘ Xornimo ayaa imaan ”
Sida Caasimadaha Jabuuti, Hargeysa iyo Xamar.
Haddii kale 5tii sanaba waxaad TV ka daawan, iley Luf Luf Axmaaro oo marna MEYD LUGTA MADAXA KA SAARI, MARNA AXMAARKU LEASH DOG ku jiidahayo
Martin Luther king waxey ku qaadatey 20 sano inuu dadka Madow ee America ka dhaadhiciyo inuu ninka Madow noolaankaro without White master.
Maxaa yeelay waxey rumeysan waayeen inuu ninka Madow yeelankaro BEERO SUUF AH, FOORNOOYIN ROOTI, iyo Dukaamo.
Maanta Caalamka kama jiro Dhul aan ka aheyn NFD SOMALIA IYO SOMALIGALBEED oo gacanta ugu jiro GUMEYSTAHA CAD ( iskaba daa AXMAARO HILBO DHIIGLEH CUNO iyo Kenyan SAXARADA DARBIGA MARIYO.
sorry iyo Falastiin ayaa ka jiro
Kkkk Kan leh waxbaan ka xumaaday iyo waxbaa lagu diganayaa, mid yar baan adigu ku leeyahay inaad barxadan Kalshaale Mooryaan ucamirto macno ma sameeyneyso ee hadaad wax ka xumaaneyso labo ninoo isku hayb ah oo musuq isku eedeyey haka xumaane waxaad ka xumaataa gurigaaga uu qaraxu ka socdo 24/7, jidadka lagaa xiray magaalada ee meydkaagii meel la mariyo la waayey iyo Ugaandhiskan habeenkii labada saac ku seexiyo Xamar taasaa inaad ka gubato kuu fiican ood ka xumaato.
Kkkk Kan leh waxbaan ka xumaaday iyo waxbaa lagu diganayaa, mid yar baan adigu ku leeyahay inaad barxadan Kalshaale Mooryaan ucamirto macno ma sameeyneyso ee hadaad wax ka xumaaneyso labo ninoo isku hayb ah oo musuq isku eedeyey haka xumaane waxaad ka xumaataa gurigaaga uu qaraxu ka socdo 24/7, jidadka lagaa xiray magaalada ee meydkaagii meel la mariyo la waayey iyo Ugaandhiskan habeenkii labada saac ku seexiyo Xamar taasaa inaad ka gubato kuu fiican ood ka xumaato. Kkkk.
Reer Qurac isagaa ubaahan in la xoreeyo ama inay wax ka xumaadaan ooy ka dhiidhiyaan, shalay bey aheyd markii meydkooda kabaha lagu aasayey ee Cabdiraxnaan Cabdishakuur gacanta laga jebiyey.
Shalay bey aheyd markii xaaskii Cabdiqaybdiid musqusha loogu galay.
Shalay bey aheyd markii Bariire dadkooda lagu laayey.
Shalay bay aheyd markii dhaqaatiirta laga laayey.
Shalay bay aheyd markii Sheeekh Shariif iyo Xassan Shiikh diyaarad inay ka raacaan Xamar loo diiday.
Shalay bey aheyd markii Cali mahdi inuu Xamar dhex socdo loo diiday.
Nin 24/7 reerkiisii uu qarax ku socdo oo magaaladiina jidadka laga xiray ganacsigii iska dhaafee meydkii meel la mariyo la waayey oo habeenkiina Ugaandhiis labo saac seexiyaan baa waxuu ku leeyahay nin nin musuqmaasuq lagu soo eedeeyey baan ka xumahay7.
War sheekooyin badan oo inaad ka xumaato ay tahay baa kuu yaalo Kkkk.
Reer Qurac waa mid mediaha ka calaacalo iyo kuwo nabaddu ka tagtay oo tiih ku jira, meel kaloo nabad la’aan kajirto ooy 24/7 qarax ka socdo ma laha oon ka aheyn meelaha ay degaan waa qoom ciqaaban, waana danuubtii iyo munkarkii ay galeen.
Horfadhiya Qabyaladey Qarankii waa iga curyamisy.
Qaar baa waxay dhahaan Daaroodku waa dad faan badan, oo saw wax lagu faano ma aha hadii Soomaaliya oon 16 sano madaxtooyadii lagu shaqeyn ooy mooryaan ku habsatay adoo waliba is cunaya oo mooryaanku walaashii dilayo, abtigii dilayo, aabihii dilayo xitaa hooyadii saw Cabdullahhi Yuusuf intuu Xamar xoreeyey mataxtooyadii Soomaaliya ma fariisan oo dawladnimadii iyo kala danbeyntii ma soo celin.
Qaar baa waxay ku dhahayaan Cabdullahi Yuusuf Itoobiyaan buu watay iyo shisheeye oo adba soow argagixiso iyo shisheeye maadan wadan mise shisheeyaha aad wadataa xalaal ah? Waa caqliga reerka kkk.
Haduu Qoorta Gareen aado Jabuuti, Nairobi ama uu la kulmo beesha caalamka waa geesi oo booskii Kheyruu joogaa waa hada ninkii Kheyre isaga boorsada ku wado intuu Dhuusamareeb geeyey madaxweynaha ka dhigay ee markii sida qaldan lagu eryey xiitaa sorry dhihi waayey ee ka tacsiyeen waayey ama cambaareyn waayey Farmaajo, halkuu Deni arintaa si adag ooga soo horjeestay oo uu cambaareyey habkii Khayre lagu eryey.
Hadii Axmed Madoobe iyo Deni aadaan Nairobi ama la kulmaam beesha caalamka waa dabadhilifyo halka Qoor Gareen halyey u yaqaanaan Kkkk.
Sxb malla hubaa in aad okey tahay?
Sow adiga kaligaa golihii iska qabsaday.
Hadaad aragto qof gacasho badan. Dadka isagaa ugu liito.
Xaa lagugu tacsiyeen waayay.
Hebel SaaS lama sheeg Aniga xaa laygugu dhahaa.
@ gafaaw. Dadkaan adigaa afyaqaane hoos ula hadal.
Mid ku waashay. Magacyo kale ayaa lasoo qaatay iyo mid kuwaashay xaa laygu arkay. Mid kuwaashay wobiyo meterin. Iyo qaar kaloo badan kkkkkkkkkk.
Caroole axmed ayaa quustay
Kkk@Sargaal dhulka miyaadan kala aqoon?
War shiikhaal JILIB yaa dego?oo Xamar Kaxda sow Shiikhaal ma degto.
FG:2daa degmo mid mid bay uga dad badan yihiin 1 magaalo ee absolutely 95%Ogaadeen dego ee Agmadow.Car soo sheeg magaalo Ogaadeen dego oo official distric ah oo 5kun laga heli karo oo Somali ku taal.War cadaaladda haka tagin.Dhoobley degmo ma ahan 12kun to 15kun baa ku nool.Absameha Somaliya oo dhan B.xaawo inta degan 120kun ayaa laba mar ka badan kkkkk
@Dabshid kama daashid miyaa HAWIYE vs Daarood?
Labadaan nin ee ogaadeenimo aad usharaxayso waa niman ubaahan in laxoreeyo alla nin gumaysi kuhoos book maxaa dhib haysta
Dameer iyo doc ka yeerba daankaa lajiyaa.
Dameer iyo doc ka yeerba daankaa la jebiyaa kkk.
Dawladnimadu waa sidaa.wax la yidhaa Oageedn iyo Caabud waaq lama yaqaan.Waxaa la yaqaanaa dawolada Kenya.
Waa nidaam dawladeed oo awood wax ku maamula.Siiba somalida gurhaya ayaa laga baxa aoo la laayaa.
Somalidu Kenyaanka kumaba jiraan.
Kenyanba looma aqoonsana.
Hase ahaatee,dawkadnimadu waa sidaa.
wadankeena waxa ka dhacay,ee hl qof loo qabanin,ayaa ah nasiibdaro.
Ilaa xoog la helona somaliya isma badalayso.
waaba wadan la xaraashay oo shaqsiyaad dilaaliin u noqdeen shisheeye.
Hore ayaan idiinku sheegay waxa ka socda somaliya inuu yahay aranchy.
Ninwalba isaga ayaa iskale meesha uu calanka ka taagntay.
War buula gaduud iyo xagar degmooyin maaha kkkkk taasaa cadaynasa inaad qabri bayax iyo shaygoosh katimid jubada hoose waa afar degmo Kismaayo afmadoow badhaadhe iyo jamaame
Yaa kugu yiri xagar degmo maaha? inaad tuulada caabudwaaq ka timid way muuqataa waayo reer gedoodku xagar in ay degmo tahay way yaqaaniin.
Jubbada hoose waa kismaayo, badhaadhe, afmadow, xagar iyo jamaame. dhoobley burburka ka hor tuulay ahayd laakiin maanta waxaa deggan dad 200,000 ka badan.
Looge buu yiri, suuye looba jooge… Hadda diiwaan galinta socota yaan garoonka Laandheeraha lagaa waayin…
Sxb Ninkaan Dabshid maaha Sheekhaal ee yaan dartiis loogu xad gudbin culmada Sheekhaaleed..
Ninkaan waalan oo marna Hiraab joogay hadana Irir wax jira ahayn ku rafana yaan loogu xadgusbin beesha sheekhaal oo Somali oo dhan la degta..
Sheekhaal Qudub reer Galbeed, Sheekhaal Looboge reer Mudug, Sheekhaal Gandershe Jubbland iyo Shabeelaha hoose, Reer aw Xasan from Hiiraan ilaa Galbeed.
Maxaa Sheekhaal ka galay Hiraab iyo Irir.
Ninkaan waa daanyeer Kablalax ku waashay iyo riyo, Undandese lover. Isku dir ka shaqeeya.
Anigu waan ku raaxaysaa cabaadkiisa waayo intee usoo marin qabiilada uu ku rafto oo ayagaba is aqoon, ilaahay badiyey. run
Jawaab ma astaahilo..
Inta waa lakala jiraan.
Aniga warkayga waa cad yahay, waxaa rabaa dowladda dhexe oo miciyo wax u qaniini karto lahayn oo maamulada ka adag yihiin madaxda maamulada iyo kan dowladda dhexe hogaaminaya doorasho shacab ku joogaan oo si sharci ah lagu soo doortay.
Dowladda dhexe wax awood ah ku lahayn ninka matalaya maamul goboleedka.
Doorasho la musuqmaasuqi karin ka dhacdo dalka oo dhan, ninka shacabka matalaya yahay nin/naag ayaga keensadeen.
Kkkk@Sarkaal runtu waa xanuun badan tahay.
Buulogaduud degmo ma ahan.
Degmooyinka aad sheegtay qaar baa lagula degan yahay sida Buaale iyo J.Dhexe absame waxaa kaga badan Dabare iyo Ajuuraan.
Kkkk Qooqaani iyo Afmadow horta dad ma joogaa?
War dhulka soo baro najis caqligu cagaha la galay.
Adigoo Ogaadeen 10kii nin 6baa Afgaduud iyo gacanweyne tuurxad ah midgaanba yaa loogu tagaa?
Soo sheeg beel Ogaadeen ka dego Somaliya 5kun ku nooshahay?
Ogaadeen ka Somaliya waxaa ka badan TALXE kaliya Ogaadeen syaa kuu sheegaya.
Kililka waa la wada degan yahay.
Ogaadeen waa laga beensheegay tiradooda.
Oday dhahay ma maqal miyaa 170 degmo ayaan ka degaa geeska Afrika 20 million waa Ogaadeen kaliya kiibaad noqotay kkkk
Doqonimada raggii idinku sheegay waa asiibeen,waliba adigu Cawlyahan waaba shushub booran ayaa ku badan sida mid Nairobi aan ku arkay oo leh asalkaygu waa oromo.
170 degmo kkk Somaliya oo dhan waa 89 degmo+48kililka+10NFD=146 ankee qof dhaha war hana ceebayn waa la waayay.
AFGADUUD IYO MAALINGUUR IYO GACANWEYBE AYAA YAABAY.
Qof dadka yaqaan hakuu waramo.
Ogaadeen waa 10 Tagoog ah iyo 90 sheegad ah.
Horta ma nin baad tahay mise naag? haddaad nin tahay waa maxay soomaali jecel? waa dhedig!
Adoo ilkayar ah oo gebigaaguba ah hal gobol oo lagula dego iyo tuulada caabudwaaq yaa kugu yiri Ogaadeen isku dhereri? Ogaadeen juubbaland gaalo madow buu ka qabsaday oo ka tirtiray! ruuxii raba taariikhda jubbaland ha tago Laybereeriga ingriiska ee London, halkaas waxaad ka heleysaa
wuxuu ingiriisku ka qoray soomaaliya gebi ahaan, qabiilka kaliya ee uu jubbaland ugu yimid lana dagaalamay waa ogaadeen si qoto dheerna wuu uga hadlay.
marreexaan taariikhdoodu waxay billaabatay wakhtigii dowladdii kacaanka, meel kale oo marreexaan magiciisa lagu soo qaaday ma jirto.
waxaan ku soo koobi marreexaan iyo ogaadeen waa dad walaalo ah colaad soo jireen ahina kama
dhaxayso, xoogaa siyaasaddaa la isku riixriixi waana wax iska caadi ah. marka waxaan leeyahay
walaalaha marreexaan waa la doogiye yaan la dacaroon!’
Waxaan damcay inaan kuu jawaabo haddana waxaan idhi soo wada akhri faalladiisa sarkaal waan arkay inuu wax badan khalday oo qabyaalad u leexday. Qabyaaladdu waa necbahay laakiin marka been lagu daro ayaa idhaa bal wax sax qudha.
Waxaa ii muuqata inaad degaanka wax badan ka taqaan haddana aad ka indha tiran tahay dhabtiisa.
Bal degmooyinka Jubbada hoose fiiri
Kismaayo deegaan Soomaaliyeed weeye oo dadku wada yaal laakiin asalkii waa meel ay Ogadeen iyo majeerteen iyo baajuun joogtay deetana Cascaseey markii 1981 ADC la geeyay lagu dul guuray oo mareexaan yimid. Taariikhda baro. Degaan inuu mareexaan ahayn waxaa ku tusinaya in xerada Guulwade degaan looga sameeyay.
Maanta oo dadku wada yaal waa ay Soomaaliyowday Ogadeenku haba ugu tun waynaadaane.
Waan kugu raacsanahay in Buulo guduud degmo ahayn laakiin cagdheeertu degganayn maantana gaal jecel la wareegay laakiin Sunkuuni ilaa Kismaayana Ogadeenku yaallo marka laga reebo carabta, sheekhaal iyo Ogdeenka isku cidhiidhinaya Goobwayn waa degaan Absame.
Afmadow waa Ogadeen qudha
Badhaadhe waa degmo soo jireen ilaa waagii siyaad Barre, waana Ogadeen qudha
Jamaame waa deegaan biya maal majority k yhay haba lala dego
Intaba waxaa majoritgi ka ah Absame.
Dabarraha aad sheegtay sakow u badi
Sheekhaal oo liiqliiqaysana Jilib u badi oo reeer Zubeer lagu ladhay.
Maxaa kuu soo hadhay from Kamsuma ila mana fuufo waa reer jareer oo beeraha aya lala yihiin Dhabayco, cagdheer, iljeex oo timid after 1999 iwm.
From Kismaayo to Diif waa 342KM waa Ogadeen miidhan, dhoobley qudha dadkkeeeda gaadhayaa 30k, Afmadow waa 65K
Kama hadlin Baardheere, ama Gedo ,
Intaba waa Ogadeen haddii half waajid lagu daro kama hadlin
Marka saaxiib hana qabyaaladayn ee warkii ilka yar meel iska dhig.
Anigu waxaan odhan karaa ilkayar waxay si rasmi u degtaa waa Beled xaawo inta kale waalala degaa…………..
Wallee Suldaanku maanta ma kugu dhalaaliyay….
Waar dalka iyo dadka ma taqaanida soo baro